Waa maxay Saamaynta iyo Beddelka Xayeysiinta Xayeysiinta? | Martech Zone
Waa maxay Saamaynta iyo Beddelka Xayeysiinta Xayeysiinta?
Sabtida, Oktoobar 24, 2015 Sabtida, Oktoobar 24, 2015 Douglas Karr
Inaad la kulanto internetka adigoon xayeysiinta kaa carqaladeyn daqiiqad kasta daqiiqado ayaa u muuqda mid cajiib ah. Nasiib darrose, maahan. Iyagoo xayiraya xaddi badan oo xayeysiis ah, macaamiisha ayaa ku qasbaya daabacadaha inay qaadaan talaabooyin adag. Iyo marka macruufka 9 uu u oggolaanayo Safari kumbuyuutarka moobiilka in lagu kordhiyo iPhone, kordhinta xayeysiiska ayaa ka kacday suuqa loogu talagalay isticmaaleyaasha moobiilka - dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Hal qiyaas ayaa soo jeedinaysa in Google ku khasaartay $ 1.86 bilyan oo dakhligii Mareykanka ah xayeysiinta sanadkii 2014. Daabacayaasha ayaa horey u lumiyey qiyaastii 9% dakhliga xayeysiinta.
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Signal, Kicitaanka Xayeysiinta Xayeysiinta, waxay bixisaa saddex dariiqo oo lagu tijaabiyo laguna hayo dakhligaaga xayeysiinta:
Muhiimadda Xayeysiinta - la shaqeynta shabakadaha xayeysiiska ee aan ku darin xogta saxda ah waxay soo saari kartaa xayeysiis aan khusayn oo macaamiisha ka kaxeynaya kuna dhiirigelinaya inay adeegsadaan xayiraadaha xayeysiinta.
waxkabadalka - isku dar dhammaan kanaalkaaga si loo hubiyo rajada iyo macaamiisha si sax ah loo aqoonsado oo si sax ah loogu quudiyo xayeysiisyada qiimaha leh.
Xayeysiinta Dhexe - Signal waxay ku talinaysaa daabacayaasha inay wax ku daraan xayeysiis hooyo si loo kordhiyo dakhliyada.
In kasta oo labada ikhtiyaar ee ugu horreysa ay talo weyn u yihiin daabacade kasta, ikhtiyaarka ah in lagu maamulo xayeysiinta waddanka ayaa iga dhigaysa mid cabsi badan Waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan xayeysiiska waa wax aan la sheegi karin. Xayeysiinta Dhaladka ah; dhanka kale, si fudud ayaa loogu qaldan yahay waxa ku jira. Daabacayaashu waa inay wax qabtaan haddii ay badbaadayaan, laakiin uma maleynayo inay fikrad fiican tahay in macaamiisha ay ku riixaan geeskaan.
Ku dhowaad 200 milyan oo qof ayaa hadda si joogto ah u isticmaalaya softiweerka xayeysiinta ah, oo ah koror 41% adduunka ah sanadkii la soo dhaafay.
Tags: dakhliga xayeysiiskaxayeysiintaadobedakhliga xayeysiintaxayeysiiska googlegoogle adwordspagefairkali ah
Ragga iyo Haweenku Ma Doorbidaan Midabbo Kala Duwan?